Ifenisha Yensimbi Yokugqoka I-Iron
Indlu Design Interior
Ukutholakala kwefenisha yensimbi esebenziwe ngaphakathi kwendlu kuye kwacatshangwa njengophawu lokunethezeka, ukunambitheka okucashile nesimo esingavamile somnikazi. Izizathu eziyinhloko ezenza ukuba kutholakale okunjalo isimo siwukuqina nokuqina okukodwa kwemikhiqizo eyenziwe ngobuciko. Futhi, ifenisha eyakhelwe phansi ihlose ukubaluleka kwayo, ngoba imfashini ayizange ibe khona kusukela ezikhathini zamakhosi.
Izitayela zanamuhla emkhakheni wokufakelwa kwezobuciko zenza kube lula ukuhumusha ifenisha ibe yiqiniso kunoma yikuphi ukuqondiswa kwezinto zangaphakathi: kusuka kwanamuhla nezokufunda kuya ekuhlekeni kwe-Retro. Konke lokhu kukuvumela ukuba ukhethe igumbi ngalinye, futhi igumbi lokulala - ikakhulukazi.
Indlu yangaphakathi lokulala ngefenisha yensimbi esebenziwe
Ikamelo lokulala liyindawo yokuthokoza, ukulala nokuphumula, lapho umuntu ehlala ingxenye yesithathu yokuphila kwakhe. Ngakho-ke, wenza konke okusemandleni ukuze enze kube lula, enhle, ehlelekile futhi enamanje. Ukuba khona kwezinto ezakhiwe ekamelweni kwenza kube lula ukuthi ikamelo lonke lizothola umbala ohlukile kanye ne-aura. I-Iron, ethobela ezandleni zabadwebi abanekhono, iphenduka ngokuyisimangaliso ibe imibhede enhle kakhulu, ehlome imilenze emihle, imile ngesitayela esilalile nesinobuhle. Ngesicelo sekhasimende, insimbi efanayo ithatha uhlobo lwebhedi elibambile, elikhuluma indaba ye-Renaissance ngamaphethini alo amakhulu, imihlobiso ecebile kanye nokubopha okungaqondakali. Ngempumelelo elinganayo, ubuciko bezobuciko bungasetshenziswa ekamelweni elingaphakathi nesakhiwo esisezingeni eliphezulu. Kulesi simo, ifenisha ehlanganisiwe yekamelo lokulala izothola ngisho, ecaciswe kahle futhi izakhi ezinkulu. Uma umbhede usuvele ukhona, futhi abanikazi befuna ukushintsha okuthile kuwo, khona-ke kungenzeka ukuthi uhlele kuphela ibhodi elibanjelwe, elizoshintsha kakhulu umklamo nesikhathi sokuhlala kuso.
Ungangeza kanjani umbhede owenziwe?
Ifenisha enezici ezakhiwe zizobe zithandwa kakhulu nobuhle, uma ifakwe amashalofu asebekhulile, izikhala noma ama-curbstones. Kuyinto engavamile kakhulu futhi kuvumelanisiwe ukubheka unobhala onemilenze eqondile, okuyokwenziwa indawo ehloniphekile ekamelweni lokulala. Ukwenza lo mqondo uphelele nakakhulu kuzosiza isibuko esikhulu, esihlanganiswe "ekutholeni" kwemivini yensimbi noma izimbali. Isixazululo sokudala sizobe sesithengwa isibuko esikhulu esisezingeni elincane, esinesimo esingavamile futhi sinqunywe ukuhlanganiswa kwezobuciko.
Ngingaphi lapho engingayifaka khona ifenisha yensimbi eyenziwe ngensimbi?
Ukuze wonke amakhosana omuntu abulawe ngeseluleko esisodwa se-stylistic, ukuhlanganisa izakhi kumele kube khona kuwo wonke amakamelo. Ngakho-ke, isibonelo, i-hanger eyenziwe ngensimbi, isibuko kanye netafula lombhede elifakwe emgodini kuyoba yindawo. Ngaphandle kokubona okuhle kokuqala kokungena endlini, le mikhiqizo inikwe ukholo nokwethembeka iminyaka eminingi. Uma kungekho isikhala esanele kubo, khona-ke kungenzeka ukuthi uzibophezele kumuntu ohlala endlini.
Izitayela zanamuhla zethempeli zisebenzisa izinto ezisongelwe futhi ngaphakathi kwendlu yokugezela. Lezi zingase zibe izinduduzo ezinhle zama-washstands, amabhodlela wefonti, amashalofu amathawula netineni. Yonke le mikhiqizo ivuliwe ngepende ekhethekile ye-polymer, okuvimbela ithonya lomswakama.
Ifenisha, eyenziwe ngobuciko bokubumba, ifaneleka kakhulu ekhishini. Lesi sinqumo sizonikeza indawo yokudlela ubukeka obuhle futhi obuhle, okwenza zonke izidlo zibe ngukuphathwa kwangempela.
Ukukhetha phakathi kwefenisha yokhuni neyakhelwe, kubalulekile ukuqondiswa izinzuzo eziyinhloko zemikhiqizo yensimbi - ukuhlala, ukuhlala isikhathi eside, ukuthembeka nokuphakama.
Igumbi lokulala-igumbi lokuhlala ekamelweni
Ungakhetha kanjani iklasi lokuqothula?
Amatshe okufakelwa umhlobiso wezinhlobonhlobo
Ikhishi lehlobo e-cottage ngezandla zabo
Inhlanganisela ye-beige ngaphakathi
Ukufakela ekhishini - izinketho zomqondo omuhle kakhulu wokuklama kanye nezixazululo zesitayela
Ucingo kusuka ebhodini elonakele
Ukwakhiwa kwe-verandah endlini yangasese
Indlela yokwenza ilanga lokukhohlisa?
Amaphaneli amathayili wokugezela
Ukuqedela uhlaka lwesakhiwo nge-plaster
Ama-Eckers - izinhlobo nezinhlobo zezakhiwo
Balyk kusuka carp yesiliva
Indlela yokwenza i-lipstick?
Shirt nge jeans
Umkhiqizo owusizo kakhulu emhlabeni
UKim Kardashian noWay West bathengisa indlu yabo yokunethezeka e-Ukraine
Igumbi lokulala endlini egodini
Ingane ezinyangeni ezingu-9 ayilali kahle ebusuku
I-Golden Taurus - yimuphi ingozi yokukhulekela isithombe?
Ummese wokwakha onama-replaceable blades
I-lavash roll nehhafu
Umkhumbi oqhekekile iso
Umdwebo ohlobisa izindonga
UJim Carrey usolwa ngokushona komuntu othandekayo
I-Cushing's syndrome ezinja
Ukulinganisa okwakhiwe kuma-dishwashers
Ikamelo Cineraria - imithetho eyisisekelo yokunakekelwa nokukhula ekhaya
Isibuko emnyango wangaphambili ku-Feng Shui
Ithanga elibhaka neju
I-anyanisi isobho lokulahlekelwa isisindo
UCristina Mendes uqhuba izifundo ze-inthanethi zesitayela samantombazane enamafutha